09/12/13 ~ Myanmar News Updates
“ အိမ်အကူကို နှိပ်စက်သည့် ပဲခူး တရားသူကြီး ဇနီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မဖမ်းနိုင်သေး ”
9:03:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ် အိမ်အကူ အလုပ်သမ တဦးကို မီးပူ၊ ဓား၊ ပုလင်းများနှင့် လက်ရောက် ကျူးလွန်ထားမှုဖြင့် တရားစွဲ ခံထား ရသည့် ဒုတိယမြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း၏ ဇနီး ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်ကို မြို့နယ် တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထား သော် လည်း ပုန်းရှောင်နေသည့် နေရာကို မသိသဖြင့် မဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပဲခူးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောသည်။
ကေအိုင်အေဌာနချုပ် လိုင်ဇာအား (၄၈) နာရီအတွင်း ထိုးစစ်ဆင်မည် ဟူသော သတင်းများလည်းထွက်ပေါ်...
ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစ္စ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရှင်းပြီ
8:55:00 PM Myanmar Newsupdates 1 comment
ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစ္စ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရှင်းပြီ (Burmese Version)
ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစ္စ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရှင်းပြီ (English Version)
ပြည်ပရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများ ဘာမှမကူညီသဖြင့် မလေးရှားရောက် တရားမဝင်မြန်မာ တစ်ရက်လျှင် ရာနှင့်ချီ အောက်လမ်းဖြင့် ပြည်တော်ပြန်
8:38:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသားများကို ဖမ်းဆီးနေသည့် အော်ပရာစီ စစ်ဆင်ရေးကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သား တစ်ရက်လျှင် သုံးရာခန့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားမဝင် နယ်စပ်လမ်းကြောင်း (အောက်လမ်း) မှတစ်ဆင့် ပြန်လာနေကြကြောင်း အဆိုပါ ပြည်တော်ပြန် လုပ်သားများကို မေးမြန်းချက်များအရ သိရှိရသည်။
တရားမဝင် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာရန် ပွဲစားကို မလေးရှားရင်းဂစ် ၉၀၀ (ကျပ်သုံးသိန်းခန့်) ပေးရပြီး ပွဲစားအစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်လာပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်း မရှိကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာသူ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အော်ပရာစီ စစ်ဆင်ရေးကြောင့် တရားမဝင် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းမှ နေရပ်ပြန်သူ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အဆမတန် များပြားလာကြောင်း၊ သွားရောက်မည့် နေရပ်ဝေးကွာမှုအပေါ် မူတည်ကာ ဝန်ဆောင်ခခွဲခြား သတ်မှတ်ကာ ပို့ဆောင်ပေးနေကြောင်း မလေးရှားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ရှိ ပွဲစားများက ပြောဆိုကြသည်။
“တစ်ရက်ကို အယောက် ၇၀ နဲ့ ၁၀၀ ကြား ပို့နေရတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ပွဲစားတစ်ဦးက ၎င်းတစ်ဦးတည်း ပို့ဆောင်ပေးနေမှု အခြေအနေကို ရှင်းပြသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်နေသည့် အော်ပရာစီ စစ်ဆင်ရေး Ops 6P Bersepadu ကြောင့် တရားမဝင် လမ်းကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးသည့် မြန်မာ ၆၅ ဦးကို စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် မလေးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံပိုင် သတင်းဌာန ဖြစ်သည့် Bernama သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြသည်။
အောက်လမ်း ဆိုသည်မှာ မလေးရှားနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့များဖြစ်သည့် မြဝတီ၊ ဘားအံစသည့် မြို့များမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခြင်းကို ဆိုသည်။
တရားမဝင် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းက မဟုတ်ဘဲ မလေးရှားန်ိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးတွင် နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား (Certificate of Idenity) ထုတ်ယူကာ တရားဝင် လမ်းကြောင်းဖြင့် သွားလာနိုင်သော်လည်း အဆိုပါ အထောက်အထားယူပါက နောက်တစ်ကြိမ် တရားဝင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရန် ခက်ခဲကြောင်း လုပ်သားများထံမှ သိရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးခံ မြန်မာလုပ်သား နေရပ်ပြန်ခွင့်ရရေး၊ အလုပ်ဆက်လုပ်လိုသည့် တရားမဝင် မြန်မာများ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ရရှိရန် နှစ်နိုင်ငံ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာလုပ်သားများ အရေးကို ဖြေရှင်းရန် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုထားသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က စတင်သည့် မလေးရှားနိုင်ငံ အော်ပရာစီ စစ်ဆင်ရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၆၀၀ ခန့် အပါအဝင် တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသား စုစုပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှား သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
8:15:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဘုရားကို ပစ်ပယ်.. ကုလားကို ချစ်တယ်..
ရှက်တတ်ရင် လဲ သေဖို့ကောင်းပါတယ်၊ ရခိုင်လို ဒေသတွေမှာ ဒို့လူမျိုးတွေ ဘယ်ကောင်တွေ နဲ့ဘယ် လိုတွေဖြစ်နေလဲ၊ ဒို့ပြည်တွင်းမှာ ဘယ်ကောင်တွေ နဲ့ ဘယ်မြို့တွေမှာ ဘယ်လို တွေဖြစ်နေလဲ အဲဒါ ကျွန်မတို့နဲ့ မဆိုင် ဒီမိုကရေစီခေတ်ပါ လွတ်လပ်စွာ ချစ်လို့ ကြိုက်လို့ ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကျနော်တို့ ဘာသာဝင် မိန်းကလေးတွေ တစ်လွဲဆံပင်ကောင်းပြီး အပါလွယ်တာကို ကျနော်တို့ အဖွဲ့က ပိုကြောင် ပါတယ်၊ အဲ့လို စိတ်ဓါတ်မျိုး ရှိတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တွေများနေခြင်းဟာ တစ်ကယ်မကောင်းပါဘူး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် ရင်လေးစရာပါ၊ ခုလို ပညာတွေတတ်၊ဘွဲ့ဒီဂရီတွေအများကြီးတွေရပြီးမှ ဘာ သာခြားနောက်ကောက်ကောက်ပါ သွားရတာတွေ၊ ပါတီနိုင်ငံရေးတွေမှာ၊အမျိုးသားရေးက အစွန်းရောက် တယ်၊ ဒီမိုကရေစီကသာ အပြည့်ဝဆုံးလူ့အခွင့်ရေးပါဘဲဆိုပြီးငပြူးက ငပြဲပြော တဲ့သူတွေ များပြား လာခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ ကင်းကွာ ခဲ့ရ မူ့တွေကြောင့်ပါ၊ သို့ပါ၍ နွေရာသီယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း မိဘများမှသားသမီး များအား ဘုရားကျောင်းကန်များ၊ တရားစခန်းပွဲများတွင်ဝင်စေခြင်းဖြင့် မိမိတို့ သားသမီးခလေးငယ်များရဲ့ ရင်တွင်းမှာ သာသနာလက်ဆင့်ကမ်းပြုနိုင်ကြပါစေ။
=မူးစုတ် မတ်စုတ် စု၍လုပ်
(ဒီပုံထဲကလို ဗမာမလေးတွေ ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ ကောင်းတယ်။
မရှက်တတ်ရင်တော့ ငရဲပြည်သို့ ဂျောင်းလိမ့်မယ်။)
မှတ်ချက်။ ။ စာသားနှင့် ဓာတ်ပုံကို Face book pageမှ ကူးယူသည်။
အထူးမေတ္တာရပ်ခံချက်။ ။ ဒီပိုစ့်လေးကို မျှဝေပေးကြပါ။ ဒီပိုစ့်ဖတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒကာမလေးများ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကို ဘယ်တော့မှမလုပ်ကြပါနဲ့။ မိမိလည်း မလုပ်သလို မိမိရဲ့ ဆွေးမျိုး ညီမ အစ်မ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်း ပြောပြ နားချ သတိပေးကြပါ။ မြင်ရတွေ့ရတာ တစ်စက်လေးမှ စိတ်ချမ်းသာစရာမရှိသလို ကျက်သရေလည်း မရှိပါဘူး။ စိတ်မချမ်းသာမှန်းသိသိကြီးနဲ့တင်ပေးရခြင်းကား အချိန်မီ တားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ထပ်၍ သတိပေးပါဦးမည်။ အမျိုးဖျတ်မဘဝ ဘာသာဖျတ်မဘဝ၊ သာသနာဖျတ်မဘဝမျိုး အရောက်မခံကြပါနဲ့လို့ သတိပေးလိုက်ပါသည်။ တစ်သံသရာလုံး ဆင်းဒုက္ခရောက်မည့်အဖြစ်မျိုး မခံယူချင်ကြပါနဲ့လို့ ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက် ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘသာာဝင်များအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိအကျိုး သူတစ်ပါးအကျိုး လောက အကျိုး သာသနာ့အကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီး ဆောင်ရွတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါသည်။
FROM-SOUTH ALAR AND LEE MOHARMAD
ကျဆုံးသူ အရာရှိအမည် ။ ဗိုလ်ဇော်မျိုးထက် ( DSA 52)
သူ့ညီမလေးက လည်းဒီနှစ် (၁၀)တန်းအောင်ပြီး ဆေးကျောင်း တက်နေပါတယ်၊
အရမ်း ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်..
- လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းများနှင့် စစ်သားများအတွက်မပါ..
- တပ်မတော်သားများ ရက်စက်စွာ အသတ်ခံရသော်လည်း ပြည်တွင်းစစ်
ချက်ချင်းရပ်ဆိုသူများ မည်သော အခါမျှ ဆန္ဒမပြကြ...
(ဘယ်ပြမလဲ ဟိုကို ဆန္ဒပြတော့ ဘယ်သူက၊ ဘယ်ကွန်ယက်က၊
ဘယ် NGO က ထောက်ပံ့မလဲ၊ ဘယ်က အညတရ သူရဲကောင်းဆု ဘာညာသာရကာတွေ ပေးမလဲ.....)
- အစိုးရလူကြီးမင်းများ အနည်းငယ်မှားလျှင် (သို့) မှားသည်ဟု မီဒီယာမှ
နားစွန်နားဖျားကြားရလျှင်ပင် ပက်ကနဲ ထေ့၊ ရိ၊ သရော်လေ့ရှိသော
ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်သည့် အတိုက်အခံဝါဒီများ စစ်သားများ အသက်ဆုံးရှုံးတိုင်း
နှာစေးလျက်ရှိ..(ဘယ်သူတွေ မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ထားလည်း တွေးကြည့်..)
- ပန်းရဲ့လမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင်းဆီ ဘာညာသာရကာများ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်လျက်ရှိ...
(အင်း.. တပ်က အလှူငွေမှ မထည့်ပဲပဲ..ပဲ..)
ခုလောလောဆယ် ဒီစာကို စိတ်တိုလို့ရေးတယ်.။
ကျွန်တော် ဒေါ်စုမွေးနေ့က ဆုတောင်းပေးဖူးတယ်၊
အတိုက်အခံထဲက သဘောကျတဲ့သူကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောဖူးတယ်.၊
ယုတ်စွအဆုံး ဘယ်ပါတီက ဘယ်အချက်တွေကောင်းတယ်၊
ဘယ်အချက်တွေ လိုတယ်လို့ အပြုသဘောနဲ့တောင် ရေးဖူးတယ်.။
(နာမည်တပ်မပြောတော့ ..) ..။
ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ Brain wash လုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဆို စစ်သားတစ်ယောက်တောင်
အဲဒီလို ဆန့်ကျင်ဖက်က လူတော်တွေ၊ လူကောင်းတွေကို ချီးကျူးဖို့
သတ္တိမွေးနိုင်ရင်. ခင်ဗျားတို့တွေက ဘာစားပြီးကြီးလို့ ရှေ့တန်းမှာ
အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ စစ်သည်တော်ကို မျက်နှာလွှဲနိုင်ကြတာလဲ....။
ဘာကြောင့်မို့ သေပြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင် ပုတ်ခတ်နိုင်ကြသေးတာလဲ..။
စဉ်းစားဦး.။ ဘယ်သူက Brain wash လုပ်ခံထားရသလဲ???
ပူတာအို ခရိုင်အတွင်း ဖြစ်ပွားသော....
ဖမ်းဆီးရမိသော စစ်သုံ့ ပန်း အရာရှိအား ....
ကျန် သုံ့ ပန်း စစ်သည်များရှေ့ တွင် ...
ခေါင်းဖြတ် ဗိုက်ခွဲကာ ....
ဗိုက်ထဲသို့ ခေါင်းကို ထည့်ပြခဲ့ပြီး.....
သုံ့ ပန်း စစ်သည်အချို့ အားလည်း ...
သွေးအေးအေးဖြင့် ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်ခဲ့သော....
ကေအိုင်အေ အဖွဲ့ အား....
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ​မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ​သံဃာတော်တွေပါဝင် ​ပတ်သက်မှုကို ​ကန့်သတ်နိုင်ဖို့အတွက် ​နိုင်ငံတော် ​သံဃမဟာနာယက ​အဖွဲ့ကနေ ​တားဆီးမိန့် ​တစ်ခုထုတ်ပြန် ​လိုက်တယ်လို့ ​သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ​ပြီးခဲ့တဲ့လတွေ ​အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ​ဘာသာရေး ​အကြောင်းပြု ​အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ​ဗုဒ္ဓဘာသာ ​သံဃာတော်တွေ ​ဦးဆောင်ပါဝင်မှုတွေ ​ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ​စွပ်စွဲချက်တွေရှိခဲ့ရာက ​အခုလို ​တားမြစ်တဲ့ ​ညွှန်ကြားချက် ​ထွက်ပေါ်လာတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ​၂ ​ရက်နေ့ကတည်းက ​ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ​နိုင်ငံတော် ​သံဃမဟာနာယက ​အဖွဲ့ရဲ့ ​အမိန့်စာမှာ ​၉၆၉ ​လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေ ​တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မပြုကြောင်း ​ကန့်သတ်ချက် ​ထုတ်ထားပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ​၆၉၆ ​လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်အဖြစ် ​သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ​အရှင်ဝိရသူကတော့ ​ဒါဟာ ​ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူးလို့ ​ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ ​ဂုဏ်တော်တွေကို ​ရည်ညွှန်းထား ​ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ​၉၆၉ ​ဂဏန်းကိုသုံးပြီး ​မွတ်စလင်ဆန့် ​ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု ​သင်္ကေတအဖြစ် ​အသွင်သွတ်သွင်းခဲ့တဲ့ ​လှုပ်ရှားမှုဟာ ​မြန်မာနိုင်ငံစုစုပေါင်း ​လူဦးရေ ​သန်း ​၆၀ ​ထဲမှာ ​၅ ​ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတဲ့ ​မွတ်စလင်တွေကို ​ခွဲခြားထားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ​နိုင်ငံတကာ ​သတင်းဌာနတချို့က ​ဖေါ်ပြပါတယ်။
၉၆၉ ​လှုပ်ရှားမှုရဲ့ ​ဦးစီးဦးဆောင်အဖြစ် ​သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ​အရှင်ဝီရသူကတော့ ​သူ့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကို ​အားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုပေမယ့် ​၉၆၉ ​လှုပ်ရှားမှု ​ပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အတူ ​အကြမ်းဖက်မှုတွေ ​တွဲဖက်ပါလာခဲ့တာ ​ဖြစ်တယ်လို့ ​ရိုက်တာသတင်းဌာနက ​ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
အရှင်ဝီရသူကတော့ ​အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ​စိတ်ထိခိုက် ​ရကြောင်းပြောခဲ့သလို ​လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေအခြင်းခြင်းအကြားငြိမ်းချမ်းရေးတည် ​ဆောက်သင့်တယ်လို့လည်း ​ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း ​သိရပါတယ်။
ဘာသာရေးအကြောင်း ​ပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ​လူပေါင်း ​၂၃၀ ​ကျော် ​အသက်ဆုံးခဲ့ရပြီး ​လူပေါင်း ​တစ်သိန်းခွဲထက်မနည်း ​အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ​အများစုက ​မွတ်စလင်တွေဖြစ်တယ်လို့ ​နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့က ​ဖေါ်ပြကြပါတယ်။
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘောဇလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)တွင် (Black & White)အမည်ဖြင့် Day Club ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျား/မ လူငယ်များ အရက်သေစာ
သောက်စားကာ ဆူညံစွာကခုန်လျက်ရှိသည့်အတွက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပြည်သူများစိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရကြောင်း၊
ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် ၉.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့
လာမယ့် ၂၃- စက်တင်ဘာမှာ အတန်းတင်စာမေးပွဲမှာ ဖြေဆိုခွင့်မရလို့ ဆန္ဒပြကြတဲ့ ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာ စီးတီး က သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် ။ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီး)မှာ ကျောင်းသား/သူ ၂၀၅၈ယောက် တတ်ရောက်နေပါတယ် ။ ကျောင်းစအပ်ပါပြီ ဆိုက တည်းက ကျောင်းခေါ်ကြိမ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မှ စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ပြုမယ် ဆိုတဲ့ စည်းကမ်း ချက်ပါရှိပါတယ် ။ မိဘတွေနဲ့ ကျောင်းသား/သူတွေကိုယ်တိုင် သိရှိပါကြောင်း လိုက်နာပါမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း လက်မှတ် ထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြေငြာဘုတ်မှာလည်း အမြဲသတိပေးစာ ကပ်ရှိထားပါတယ်။ (၂)လ တကြိမ်လည်း ကျောင်းသား/သူတွေ ကိုယ်တိုင် မိမိတို့ကျောင်းတတ်ချိန်ရာခိုင်နှုန်းကို သိရှိစေဖို့ ထုတ်ပြန်ပေးတတ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အခုလို ဆန္ဒပြပြီး အသနားခံစာတင် တဲ့ ဖြစ်စဉ်ထဲက ကျောင်းသား/သူတွေ ဟာ ကျောင်းပြေး တဲ့ လူတွေဖြစ်ပါတယ် ။ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်ဘာစီးတီး က ပြင်ဦး လွင်မှာ ဖွင့်လှစ် ထားတာပါ ။ဒီတော့ လည်စရာပတ်စရာတွေ အများသားပေါ့ဗျာ။ တက္ကသိုလ်ဟာ ရတနာပုံမြို့သစ်ထဲမှာ ရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အပြင်ထွက်ဖို့ လမ်းတွေအများကြီးပဲဗျ။ မြို့ခံနည်းပြီး နယ်ကျောင်း သားတွေများတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်အပြင် ကျောင်းဖွင့်ရက်ကိုပါ ကျောင်းပြေးပြီးလျှောက်လည်ကြ၊ အတွဲရှိသူတွေက ချိန်းတွေ့ကြပေါ့ခင်ဗျာ။မန္တလေးကလာတတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ တစ်ချို့ကျောင်း သားတွေ ဆိုရင် ကျောင်းဖွင့်ရက်ကို မန္တလေးထိဆင်းတတ်ကြ ပါသေး တယ်။ ကျောင်းသားတော်တော် များက သင်ခန်းစာ တတ်ရောက်မှူခေါ်ကြိမ်ခေါ်ဆိုမှူ(roll call)အချိန် အထိ လက်ချာခန်း ကို ရောက်မ လာတတ်ကြပါဘူး။ ရောက်လာတဲ့သူတွေထဲက တဝက်လောက်ကလည်း ခုံပေါ်မှောက်အိပ်နေတဲ့ လူတွေများပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဖုန်းကလိနေသူတွေအပြင် ရှေ့က (roll call)) ခေါ်နေတဲ့ ဆရာ/မ ကိုအားမနာ ရိုသေမှူမရှိပဲ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် စကားပြောနေသူတွေ နဲ့ ဖွန်ကြောင်နေသူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ကန်တင်းကနေ မထတဲ့သူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းတာ နာပေမယ့်လည်း ကျောင်းသားပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်တတ်တဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ ဘာမဟုတ်တဲ့ စည်းကမ်းပျက်ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော်လောက်ကြောင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ရတနာပုံဆိုက်ဘာ စီးတီး က ကျောင်းသားတွေက ဒီလိုချည်းလားဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့အပြောကို မခံချင်လို့ ငါးခုံးမ တွေအကြောင်း ကို ပြောပြရခြင်းပါခင်ဗျာ။
ကျောင်းသား/သူတွေဟာ ပြင်ဇာရွှာနားမှာ အဆောင်ငှားနေကြတာပါ။တစ်ချို့ကျောင်းသားတွေဆို ပရက်တီ ကယ်(လက်တွေ့)ချိ်န် ရှိမှသာ ကျောင်းလာကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အခုကိစ္စမှာ ကျောင်းသားတွေ ဘက်ကလွန်သလား ၊ကျောင်းပြေးတွေလွန် သလားဆိုတာ မိဘပြည်သူများပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ။ ကျောင်းသားပေါင်း ၂၀၂၅ ယောက်ရှိတဲ့ကျောင်းမှာ ကျန်တဲ့ကျောင်းသား ၁၈၄၇ ယောက် က ကျောင်းမှန်မှန်တတ်လို့ စာမေးဖြေဆိုခွင့်ရရှိပြီး အခုဆန္ဒပြ တောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းသား ၁၇၈ ယောက်( ၈% လောက်ပဲရှိတဲ့ကျောင်းသားတစ်စု)က ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်လို့ စာမေးပွဲဖြေခွင့်မရဘူး ဆိုတာ ဘယ်သူတွေ အလွန်ပါလဲ။ကျောင်းမှာလည်း ခေတ်နဲ့အညီ ဗ-က-သ တွေဖွဲ့ပါတယ် ။ဘာလုပ်ပါ သလဲ။ ကျောင်းပြေး ခေါင်းဆောင်တွေများတဲ့ အဖွဲ့ပါပဲ။စာသင်ခန်းထက် ပြင်ဦးလွင်လမ်းမမှာ လမ်းကွေ့ ဘယ်နှကွေ့၊ဘယ်နေရာမှာ ဆီဆိုင်၊ဘယ်နေရာမှာ ကွမ်းယာဆိုင် ဆိုတာပိုသိတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ ။နောက် ရှိပါသေးတယ်။ W.U .S (We are University Students) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေပါပဲ ။သူတို့အလုပ်က ငါတို့က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ၊ငါတို့ကိစ္စငါတို့ဖြေရှင်းမယ်၊ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါတို့အဖွဲ့ကဖြေရှင်းပေးမယ် ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ပါပဲ။အဲဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ဗ-က-သ လည်းပါတယ်။ အလကားအဖွဲ့ပါဗျာ။ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားရေးရာ ကိစ္စတွေ ကျောင်းပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တွေမှာသူတို့နှစ်ဖွဲ့စလုံး ဘယ်မှာမှ သုံးစားမရတဲ့ သူတွေ စုစည်းနေ တဲ့သူတွေပါပဲ။ အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး W.U.S နဲ့ဗ-က-သ တွေ အာကျယ်ပြီး ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲဟင်းစားတဲ့ အဖြစ်ကိုပြောပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ ကျောင်းခေါ်ကြိမ်ကို ဘာသာရပ် အလိုက် လည်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အောင် တတ်ရောက်ရပါတယ်။ လက်တွေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လုပ် ဆောင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့ပညာတွေက သတင်းအချက်အလက် အိုင်တီနည်းပညာတွေ နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေချည်းပါပဲ။ တကယ်တတ်မြောက်မှ ရတဲ့ပညာရပ်တွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင်ပေး သူ တွေကလည်း ဖိဖိစီးစီး သင်ပေးသလို ကျောင်းသား/ သူတွေ ကလည်း ကိုယ်တိုင် သင်ယူလိုစိတ် တတ်မြောက် လိုစိတ်နဲ့ သေသေချာချာလိုက်နာ သင်ယူကြရပါ တယ်။ ကျောင်းပျက်တဲ့ အခါ ကျောင်းသား ကိုလည်းကောင်း၊ မိဘကိုလည်းကောင်း သတိပေးပါတယ် ။
ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ကို သိန်းဆယ်ဂဏန်း နဲ့ ကျောင်းထားပေးပေမယ့် သူတို့ကျောင်းပြေး အလေရိုက်နေတာကို အိမ်ကသိရင် ဗျင်းမှာစိုးလို့ ငါတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိစ္စ ငါတို့ဖြေရှင်းမယ် အိမ်ကိုခေါ် စရာမလို အသိပေးစရာမလိုဆိုပြီး W.U.S က အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး လုပ်တော့တာပဲ။ အဲဒါေ ကြာင့် ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းပြေးနေတာကိုအချိန်မှီတားမြစ်နိုင်ဖို့ ကျောင်းက ကြိုးစားထားပေမယ့် အသုံးမကျတဲ့ W.U.S နဲ့ဗ-က-သ ဖွန်ကြောင်၊ ငမူးကောင်တွေက ဦးဆောင်ပြီး တစ်ခြားကျောင်းသားတွေ အတွက်ကို လည်း မိဘကိုမခေါ်ပဲ ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါမဖြစ်စေရပါဘူး ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါကျောင်းပြေးလိုက် အလေရိုက်လိုက်လုပ်နေပြီး အခုလိုကျောင်းရဲ့ ကျောင်းခေါ်ကြိမ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း မပြည့်တဲ့အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် မရခဲ့ခြင်းပါ ခင်ဗျာ။အဲဒါကြောင့်လည်း အခုစာမေး ပွဲဖြေခွင့်မရတဲ့အထဲမှာ သူတို့နှစ်ဖွဲ့က လူတွေတစ်ဝက်လောက် ပါပါတယ်။ အခုကျမှ သူတို့တွေကပြော ပါသေးတယ်။ ပေါင်ချိန်ဇာတ်ကား ထဲကလို မတရားခံရတာပါတို့၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျပါတယ် တို့ ဆိုပြီးတော့ လေလုံးထွားကြပါသေးတယ်။မိဘပြည်သူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများခင်ဗျား။ လက်ချာ ချိန် ကျောင်းပြေး လိုက် ဆော်ကြောင်လိုက် လမ်းသလားလိုက် လုပ်နေပြီး စာမေးပွဲဖြေ ခါနီးမှ ကျောင်း ကိုလာ၊ခေါ်ကြိမ်မပြည့်လို့ စာမေးပွဲဖြေခွင့်မရ ၊ဖြေခွင့်မရတော့(ကျပေါ့-ဒါများအဆန်း လုပ်လို့) W.U.S နဲ့ ဗ-က-သ က ကွမ်းဂျိုးတွေဦးဆောင်မှူနဲ့ ဆန္ဒပြကြတာပါ။
တစ်ကျောင်းလုံးရဲ့ ၈% သော ကျောင်းပြေးတစ်စုရဲ့ အလိုကိုလိုက်ပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်သော ကျောင်းတတ် မှန်တဲ့ကျောင်းသား တွေကလည်း သူတို့လို ကျောင်းပြေးနေပြီး စာမေး ပွဲ ဖြေဆိုချိန် ကျမှ ဆန္ဒပြပြီး စာမေးပွဲဖြေခွင့်တောင်းပါတော့မယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စ ကို ပြတ်ပြတ် သားသား စံပြ အနေနဲ့ ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေးဖို့နဲ့ သူတို့ကျောင်းပြေးတွေတောင်းဆိုတာကို မလိုက်လျော ဖို့ ပြန်လည်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျား။
(အောက်ပါပုံ တွင် ကျောင်းစအပ်စဉ်က သိရှိလိုက်နာပါမည့်အကြောင်း စည်းကမ်းများ နှင့်ဝန်ခံကတိပြုချက် များကိုဖော်ပြထားပါသည်)
Apple တို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ iPhone 5S
From : .... အောင်ခမ်း (ရိုးရာလေး)
မနေ့ညက လူတိုင်း စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ iPhone 5S ကို ကြေညာပြီးသွားပါပြီ။ ထူးခြားလာမှု အနေနဲ့ ကတော့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး 64 bit စမတ်ဖုန်းလို့ ဝံ့ကြွားနိုင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ သူ့ Processor က 64 bit အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရဲ့ မြန်ဆန်မှုနဲ့ သိပ်တောင် မကွာတော့ ပါဘူး။ Apple ရဲ့  နောက်ဆုံး ထွက်A7 Chip ကို အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone 5C မှာတော့ A6 ပါ။ 5S မှာ နောက်ထပ်ထူးခြားချက်က လက်ဗွေ လုံခြုံရေး စနစ် ပါဝင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Touch ID Finger Print Scanner ကို Home Buttom မှာ ထည့်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာ ကတော့ 8 megapixel ထဲပါ။ ဒါကိုလည်း နည်းတယ်လို့တော့ ဆိုလို့ မရပါဘူး။ သူ့မှာ Pixel အရည်အသွေးက 1.5µ ရှိပါတယ်။ ရှေ့ မှာလည်း 2.2 iSight Camera ပါရှိပါသေးတယ်။ LED flash ပါမယ်။ Auto Image Stablization ပါဝင်ပါမယ်။ Slomotion Video ရိုက်ကူးနိုင်မှုကလည်း ထူးခြားချက် တစ်ခုပါ။ အားလုံး ကြားခဲ့တဲ့ သတင်းအတိုင်း ရွှေရောင် ဗားရှင်းလည်း ထွက်ပါတယ်။ ခဲရောင်၊ ရွှေရောင်၊ မီးခိုးနုရောင် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကောင်းပါတယ်။ iOS7နဲ့ မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးလက်မ Display ပါပဲ။ ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ကလည်း iPhone5နဲ့ တူနေပြန်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ Unlocked ဗားရှင်း 16GB, 32 GB, 64 GB, ကို ၆၄၉ ဒေါ်လာ၊ ၇၄၉ ဒေါ်လာ၊ ၈၄၉ ဒေါ်လာ အစရှိသဖြင့် အသီးသီးကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရေင်ဗားရှင်းက ပစ္စည်းပျက်လောက်အောင် လူကြိုက်များမယ် လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ မကြာမီ ဈေးကွက် ရောက်ရှိတော့မယ် iPhone 5S အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ၎င်းတို့ Official site မှာ ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
8:48:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
8:46:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
8:44:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
“ အိမ်အကူကို နှိပ်စက်သည့် ပဲခူး တရားသူကြီး ဇနီး ရဲ...
ပြည်ပရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများ ဘာမှမကူညီသဖြင...
KIA ၏ အဆင်အခြင်မဲ့ လုပ်ရပ်များအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန...